Vimeo nwetara Video Market Share: Okporo ụzọ Up 269% | Martech Zone
Na nso nso a, a na m eme ọtụtụ nyocha na vidiyo maka ndị ahịa m. Vidio na-aghọ nnukwu ihe na ntanetị n'ịntanetị; n'eziokwu, enwere ezigbo ohere na saịtị gị ga-agafe ezigbo pasent nke ndị ọbịa ma ị na-enye video. Ọhụrụ smart phones na-kachasị maka video na viewership na iti mkpu.
Youtube abụrụla engine nke abụọ kachasị na ịntanetị. Ma nyiwe vidiyo ndị ọzọ na-eme nke ọma, yana uto ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na afọ karịa afọ. Ka o sina dị, Vimeo emeela nnukwu uzo… ịgafe asọmpi abụọ kachasị - Metacafe na Dailymotion. Lee ndị ọhụrụ stats si mpi:
Vidio na-aghọkwa ihe dị mkpa na injin ọchụchọ. Google na-agbasakarị nsonaazụ vidiyo kacha ọhụrụ, yana onyonyo, na peeji esi nchọta ihe nchọta oge niile. The nyiwe na-aghọ ndị ọzọ mgbanwe… Nnwale ule Youtube na nso nso a kwere ka ọdịda peeji nke na nnabata onye ọrụ!
E wezụga ikike SEO, vidiyo dị oke mma ịgafe maka ihe ahịa abụọ:
Ike vidiyo ịkọwapụta usoro dị mgbagwoju anya ma ọ bụ mkparịta ụka dị mfe. Gbalịa ịkọwa site na onyonyo na ederede mgbe ị nwere ike ịme vidiyo vidiyo nke 30 nke na-eme ka echiche na-enweghị ntụpọ.
Ike vidiyo ijikọ onwe ya na nke ọma na ndị na-ege ntị. Ọ bụrụ na foto ruru otu puku okwu, vidiyo ruru nde.
Ekwenyesiri m ike na ụgwọ dị ala Vimeo, ogo dị elu na onyinye siri ike na-eme ka ọ bawanye. Nchịkwa azụmahịa bụ $ 59 otu afọ na 5Gb nke uploads kwere kwa izu. Saịtị-enye ohere maka elu definition playback na oké nchịkọta na omume ọma e ọwa peeji. Anyị na-adịbeghị anya tinye a DK New Media Ọwa vidiyo nke ahu di nma. Ha na-ekwe ka njikọta na njedebe nke vidiyo gị na iwepụ akara ngosi ha mgbe ha na-etinye ya.
Goliath na-aga n'ihu Youtube… yabụ ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike iru ọtụtụ mmadụ, ịkwesịrị igwu egwu na azụ ụlọ ha. Agụkwala ndị ọzọ na egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị! Enwere ọtụtụ ohere.
Tags: Accenturenkọwa blogỌkpụkpụpịa ebe a iji nye iwuọnụọgụgụ facebookSitesocialitevideo laptọọpụanya